नेपाल इन्ष्टिच्युट अफ कम्पनी सेक्रेटरिजमा नयाँ सञ्चालक समिति चयन « Arthabazar.com
नेपाल इन्ष्टिच्युट अफ कम्पनी सेक्रेटरिजमा नयाँ सञ्चालक समिति चयन
प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०७७, आईतवार १०:२४
अहिलेको विश्वव्यापीकरण र प्रतिस्पर्धी बजार अर्थतन्त्रको समयमा नेपालका कर्पोरेट हाउसहरुमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न र नेपालका कम्पनीहरुलाई पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धी बनाउन कम्पनी सचिवहरुको भूमिका अहम हुने भने भएकाले उनीहरुको छुट्टै कानुनबाट नियमन गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएको थियो ।
नेपालले वैदेशिक लगानीको कुरा उठाइरहेको बेला विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपालका व्यवसायिक संस्थाहरुमा कर्पोरेट कल्चर छ छैन् ? लगानीको सुरक्षा र आर्थिक पारदर्शिताका लागि कस्तो व्यवस्था छ ? लेखापरीक्षण कसरी गरिन्छ ? कम्पनी सेक्रेटरीको काम कसरी हुन्छ ? जस्ता कुराहरु हेर्ने भएकाले पनि कम्पनी सचिवको पेशालाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी रहेको संस्थाका पदाधिकारीहरुको भनाई छ ।